Kevin Mirallas: waxaan doonayay in aan ku laabto Olympiacos’. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kevin Mirallas: waxaan doonayay in aan ku laabto Olympiacos’.
Kevin Mirallas: waxaan doonayay in aan ku laabto Olympiacos’.
Posted by: radio himilo September 4, 2017
Muqdisho – Kevin Mirallas ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayay inuu ku biiro kooxda Olympiacos, laakiin Everton ma aysan u ogoleyn inuu ka tago Goodison Park.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium-ka ayaa laga saaray kooxdii Everton ee booqatay Chelsea ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, iyadoo tababaraha Toffees-ka, Ronald Koeman uu xaqiijiyay in Mirallas lagaga saaray sababo la xariira dhibaato dhaawac muruqa ka heysata.
Olympiakos ayaa si aad ah loola xiriiriyay inay u dhaqaaqista ciyaaryahankan ku iibinayeen Everton sanadkii 2012, laakiin kooxda reer Greek ayaa loo diiday fursad ay dib ugula soo saxiixaneyso 29 jirkan ay horay u dhumiyeen.
“Runtii waxaan doonayay inaan ku biiro Olympiacos, aad ayaan u murugooday, Everton ma rabto inay isii deyso,” Mirallas ayaa sidaasi u sheegay DHET.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo taageerayaasha Olympiacos: dhamaan fariimo badan ayay ii soo direen, waana inay ogaadaan inaan jeclahay kooxda iyo sida aan horay u sheegay, maalin un ayaan ku soo laaban doonaa.”
Mirallas ayaa dhaliyay 38 gool 177 kulan oo uu u saftay Everton tan iyo markii uu usoo dhaqaaqay Premier League.
Previous: Marka Dowladdeennu aysan Musuqmaasuq lahayn!
Next: Arsene Wenger: ‘Alexis Sanchez kuma uusan dhawaan in uu ka tago Arsenal’
Australia: Qoysaska Muslimiinta oo carruurtooda baraya inay soomaan
Daraasad lagu sheegay in Soonku u wanaagsan caafimaadka jirka iyo maskaxda
Talooyin aad uga hortagi karto oonka maalintaada soonka